राजनीति Archives - Onlines Time
Jan262022 by puspaNo Comments
दाङ कारागारबाट फरार कैदी पक्राउ परे. मोटो रकमको चलखेल भगाउन युबतिको प्रयोग.Jan Awaj Nepal
दाङ कारागारबाट फरार कैदी पक्राउ परे. मोटो रकमको चलखेल भगाउन युबतिको प्रयोग.Jan Awaj Nepal यो पनि पढनुहोस्। बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिज २०० करोडको मनी लान्ड्रिङ प्रकरणमा नाम आएपछि चर्चामा छिन् । उनका धेरै तस्विरहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । जसमा अभिनेत्री ठगी मुद्दाका मुख्य अभियुक्त सुकेश चन्द्रशेखरसँग निकै नजिक देखिएकी छिन् । कतिपय तस्विरमा उनको शरीरमा लभ बाइट प्रष्ट देखिन्छ । तस्बिरमा दुवैको स’म्ब’न्ध प्रष्ट देखिन्छ । तर, अभिनेत्रीले आफू आफैं यो जालमा फसेको बताउँछिन् । यस्तो अवस्थामा उनले मानिसहरूलाई यी तस्विरहरू सेयर नगर्न अपील समेत गरेकि छिन् । तर आज हामी सुकेशसँग उनको स’म्ब’न्धको बारेमा कुरा गर्दैनौं। बरु, हामी सलमान र उनको स’म्ब’न्धको बारेमा कुरा गर्नेछौं। ज्याकलिन फर्नान्डिजको नाम धेरै बलिउड सेलिब्रेटीसँग जोडिएको छ । जसमा साजिद खान, रितेश देशमुख, सलमान ख...
Jan42022 by puspaNo Comments
कमलको रहस्यमय मृ-त्युमा शिक्षकको हात छ त ? कमलाको परिवारले किन स्विकार गर्दैन यो कुरा?Kamala Acharya
कमलको रहस्यमय मृ-त्युमा शिक्षकको हात छ त ? कमलाको परिवारले किन स्विकार गर्दैन यो कुरा?Kamala Acharya यो पनि पढनुहोस्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु-याएको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये १२६ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष सीआईबीको छ । ब्युरोका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । “सरकारी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही दिनमै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौँ”, उनले भने । यस प्रकरणको अनुसन्धानको हदम्याद यही पुस २७ गते सकिँदै छ । उक्त समयभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधानका कारण ब्युरोले यसै साता जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन...
Jan22022 by puspaNo Comments
बुबाको ला’श लिएर म’लामी गएका तिन जना छोराको बस दु’र्घटना हुदा एकै साथ मृ’त्यु
बुबाको ला'श लिएर म'लामी गएका तिनजना छोराको बस दु'र्घटना हुदा एकै साथ मृ'त्यु। पाल्पामा भएको मलामी सवार बसमा दुर्घटनामा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । बुटवलदेखि रिडी हिँडेको मलामी सवार बस पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकास्थित लघुवामा दुर्घटना हुँदा आठ जनाको मृत्यु भएको हो । आइतबार बिहान साढे १० बजे ३५ जना मलामी सवार लु १ ख ७२७९ नम्बरको बस दुर्घटना भएको हो । स्थानीयका अनुसार विरबहादुरका ६ भाइ छोरामध्ये एक जनाको पहिले नै मृत्यु भइसकेको छ। अहिले बुबाको शव अन्त्येष्टीको लागि गुल्मीको रिडी लैजाँदै गर्दा बस दुर्घटनामा परि तिन जना छोराको पनि मृत्यु भएको जानकारी स्थानीयबासिन्दाले दिएका हुन् । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका २ लघुवामा दुर्घटना भएको बसका चालक फरार रहेका छन्। उनी दुर्घटनालगत्तै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सो घटनामा घाइते भएका १३ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। बुटवलबा...
Dec282021 by puspaNo Comments
घटनास्थल पुग्दा प्रत्यक्षदर्शीले खोले मुटुकाम्ने रहस्य|श्रीमानले दिनभरी कुटेकाथिए|हस्पिटल नलगी मा रे
घटनास्थल पुग्दा प्रत्यक्षदर्शीले खोले मुटुकाम्ने रहस्य|श्रीमानले दिनभरी कुटेकाथिए|हस्पिटल नलगी मा रे यो पनि पढनुहोस्। नेपालका पहाडहरूमा पाइने जडीबुटीमा शिलाजीतको विशिष्ट स्थान छ आयुर्वेदमा शिलाजीतको खुब प्रशंसा गरिएको छ र यसलाई जडीबुटीहरूको राजा मानिएको छ । बलपुष्टिकारक, ओजवर्धक, दौर्बल्यनाशक र पौष्टिक गुण शिलाजीतमा पाइन्छ । रोगीको रोग हटाउनका लागि मात्र नभई स्वस्थ व्यक्तिका लागि पनि शिलाजीतको बडो महत्व छ । यौन दौर्बल्य अर्थात् नपुंसकताबाट पीडित विवाहित व्यक्तिले मात्र नभई अविवाहित युवकले पनि यसको सेवन गर्दा लाभ पाउँछ ।विशेषगरी मधुमेह, धातुक्षीणता, बहुमूत्र, स्वप्नदोष, शारीरक दुर्बलता लगायतका रोगहरू यसले निर्मूल बनाइदिन्छ । उचित समयमा उचित योगका साथ विधिपूर्वक शिलाजीतको प्रयोग गर्दा असाध्य मानिएका रोग पनि नष्ट हुन्छन् । शुद्ध शिलाजीत १० ग्राम, केशर दुई ग्राम, अम्बर दुई ग्राम...
नेपालको सिमास्तम्बमा भारतको मनोमानी,सिमा स्तम्बमा भारतीयले लुगाधुदै,भारतीयले स्तम्ब नेपाल तिर सार्दै
नेपालको सिमास्तम्बमा भारतको मनोमानी,सिमा स्तम्बमा भारतीयले लुगाधुदै,भारतीयले स्तम्ब नेपाल तिर सार्दै यो पनि पढनुहोस्। नेपालका पहाडहरूमा पाइने जडीबुटीमा शिलाजीतको विशिष्ट स्थान छ। आयुर्वेदमा शिलाजीतको खुब प्रशंसा गरिएको छ र यसलाई जडीबुटीहरूको राजा मानिएको छ । बलपुष्टिकारक, ओजवर्धक, दौर्बल्यनाशक र पौष्टिक गुण शिलाजीतमा पाइन्छ । रोगीको रोग हटाउनका लागि मात्र नभई स्वस्थ व्यक्तिका लागि पनि शिलाजीतको बडो महत्व छ । यौन दौर्बल्य अर्थात् नपुंसकताबाट पीडित विवाहित व्यक्तिले मात्र नभई अविवाहित युवकले पनि यसको सेवन गर्दा लाभ पाउँछ ।विशेषगरी मधुमेह, धातुक्षीणता, बहुमूत्र, स्वप्नदोष, शारीरक दुर्बलता लगायतका रोगहरू यसले निर्मूल बनाइदिन्छ । उचित समयमा उचित योगका साथ विधिपूर्वक शिलाजीतको प्रयोग गर्दा असाध्य मानिएका रोग पनि नष्ट हुन्छन् । शुद्ध शिलाजीत १० ग्राम, केशर दुई ग्राम, अम्बर दुई ग्राम...
Dec252021 by puspaNo Comments
बिहेमा जन्ती गएको युवाको मृ”त्यु घर नजिकैको गोठमा मृत फेला परेपछि…..(भिडियो सहित)
सल्यानमा छिमेकीको विवाह भोज खान गएका व्यक्तिको रहस्यमय मृ’त्यु भएपछि प्र’हरीले वडाध्यक्ष सहित चार जनालाई प’क्राउ गरेको छ । गत मङ्सिर २० गते दार्मा गाउँपालिका २ पाजाखोलाका ७० वर्षीय टेक बहादुर खत्री विवाह भइरहेको घर नजिकैको गोठमा मृ’त फेला परेका थिए । मृ’तकका आफन्तले ह’त्या ग’रेको भन्दै कि’टानी जाहेरी दिएपछि प्र’हरीले तीन जनालाई मङ्सिर २७ गते प’क्राउ गरेको थियो भने वडाध्यक्षलाई पुस ५ गते प’क्राउ गरेको हो मृ’तक खत्री वडाध्यक्ष केसीले चलाएको मोटरसाइकलबाट ल’डेर मृ’त्यु भएको आफन्तले बताउँदै आएका छन् । प्र’हरीले वडाध्यक्षले चलाउँदै आएको लु ७१ प ३९२७ नम्बरको मोटरसाइकल समेत नियन्त्रणमा लिएको छ । प’क्राउ परेका तीन जनाले वडाध्यक्षको नाम लिए पछि उनलाई अनुसन्धानका लागि प’क्राउ गरी हि’रासतमा राखिएको जिल्ला प्रह’री कार्यालय सल्यानका प्रवक्ता श्याम प्रकाश यादवले जानकारी दिनुभयो । खत्रीको मृ’त्युक...
Exclusive: हिमानीले छठघाटमा पाइला टेक्दा जनसागर उर्लियो, लाखौले जनताले घेरे, प्रहरीलाई नै हम्मेहम्मे (भिडियो हेर्नुहोस) भिडियो हेर्नुहोस् याे समचार पनि पढ्नुहोस अनिता खडका र विनोद खडका यो जोडीलाई नचिन्ने सायदै कम होलान् ।यो जोडी नेपालकै एउटा नमूना जोडीको रुपमा चिनिएको छ । टि`कटकबाट भा’इरल भएको यो जोडीको वास्तविकता निकै नै मा,’र्मिक र आत्मियताले भरिएको छ । अहिले पछिल्लो समय अनिताको स्वास्थमा निकै नै सुधार आएको छ । कुनै समय अनिताको शरीरको तौल घटेर २७ किलोसम्म पुगेको थियो । तर अहिले अनिता निकै मोटाएकी छिन । अहिले उनको तौल बढेर ५५ किलो पुगेको छ ।अहिले उनी बिना कसैको सहारा बस्न सक्छिन सामान्य चिजहरु मुखसम्म हातले लगेर आफै खान सक्छिन् ,मान्छे चिन्छिन् र एकदमै खुसिसाथ रहन्छिन् । अ`प्रेसन फे`ल भईसकेपछि निकै नि दु`खद समयबाट गुज्रिरहेको अनिता परिवार अहिले भने सामान्य खुसि र अधिक्तम दु...
Nov32021 by onlinestimeNo Comments
पछिल्लो समयको सांगितिक बजारमा नेपाली लोक गित संगित चर्चा परिचर्चामा रहेको छ । समस्त लोक दोहोरी गित सबै दर्शक स्रोताको नजरमा लोकप्रिय भन्दै गएका छन् । कति गितहरुले त करोड क्लव प्रवेश गरिसकेका छन् त कति गर्ने बालामा छन् । यसै सन्दर्भ बजारमा धेरै सर्जकले आफ्नो गित दर्शक स्रोतामा पठाएका र कयौ माया पाएका छन् । लोक तथा दोहोरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरेर गीतहरु आउनेक्रम बढेको छ । मायाप्रेम र बिछोडले भरिएका गीतहरु दैनिकजसो बजारमा आईरहेका छन् । त्यसो त रमाईला, नचाउने किसीमका गीतहरुपनि बजारमा आईरहेका छन् तर बढिजसो मायाप्रेमका गीतहरु आउने गर्छन् कारण यस्ता गीतलाई दर्शकश्रोताले रुचाउछन् । नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा एकपछी अर्को गर्दै निकै उत्कृष्ट गीत संगीत बजारमा आइरहेका छन् । सोहि क्रममा लोकप्रिय गायिका शान्ति श्री परियार र गायक कुशल बेलबासे को सुमधुर आवाजमा रहेको निकै मर्मस्पर्शी ...
Oct252021 by onlinestimeNo Comments
प्र*चण्डलाई ओलीले दिए अहिलेसम्मकै क’डा दनक: प्र’चण्डको बोली नै बन्द हुनेगरी यतिसम्म भने ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
प्र*चण्डलाई ओलीले दिए अहिलेसम्मकै क'डा दनक: प्र'चण्डको बोली नै बन्द हुनेगरी यतिसम्म भने ! (भिडियो हेर्नुहोस्) भिडियो हेर्नुहोस् याे समचार पनि पढ्नुहोस् मुलुकमा आमूल परिवर्तनका लागि पटकपटक आन्दोलन, जनआन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति भए। हरेक परिवर्तनमुखी आन्दोलनले जनताका आधारभूत समस्या हल गर्ने सपना बाँडे। गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षालगायत सबैखाले सामाजिक विभेदको अन्त्यसहित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सपना बाँडियो। तर राजनीतिक दलका सबै नारा कागजमै सीमित भए। सत्ता र शक्तिको दौडमा लागे। बाँकी सबै आश्वासनलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरे। त्यसैले अहिले पनि समाजमा गरिब, धनी र शोषित, शाषितलगायत विभेद तथा असमानता कायमै छ। निरन्तररूपमा समाजलाई असमानरूपमा दमन शोषण गरेका सम्भ्रान्त वर्गले नै भूमि, सत्ता र सरकारमा आफ्नो बलियो हैकम जमाउँदै आएका छन्। यसकारण अहिले पनि...
गौतम बुद्ध विमानस्थल तयार, खाडीका यी देशबाट हुनेछ सिधा उडान !
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ माघ १ मा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना शिलान्यास गर्दा यहाँबाट नजिकै भारतको कुशीनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सुरसार थिएन । बुद्ध धर्मावलम्बीलाई लक्ष्य गरेर भैरहवाबाट करिब २ सय किमि दूरीमा रहेको कुशीनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । तर चार वर्षअघि निर्माण सकिनुपर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने हो, कुनै टुंगो छैन । यहाँ आयोजनाको म्याद थप गरेर लम्ब्याउने काम भइरहेको छ । बौद्ध धर्मावलम्बी सीधै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी भित्र्याउन विमानस्थल निर्माण थालिएको हो । त्यो सपना कहिले पूरा हुन्छ, ठेगान छैन । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन र सहठेकेदारबीच विवाद, भूकम्प, नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन हुँदै कोभिड संक्रमणले गौतम बुद्ध विमानस्थल आयोजना निर्माण पर धकेलिँदै...